Konya Metro တင်ဒါတင်ဒါ၏ရလဒ် RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး42 KonyaKonya Metro လေလံရလဒ်
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, အထူးသတင်းများ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
ဝေးနေဖြင့်အမြင့်ဆုံးတသမတ်တည်း "ဖိတ်ကြားချက်ကို" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အသိပေးစာမပါဘဲပုံစံကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်တူရကီ, တူရကီ, အောက်တိုဘာလ22019 အတွက်တင်ဒါများ Konya မက်ထရိုပထမအဆင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပနု၏နာမ၌အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ "Konya Necmettin Erbakan တက္ကသိုလ် Meram မြူနီစီပယ်အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေး (Ring ကိုနာရီ) ပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လြှပျစစျစနစ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးတပ်ဆင်၏ Tools များနှင့်ကော်မရှင်ငါ xnumx.ot" ။
1-တရုတ်အမျိုးသားစက် (CMC) + Taşyapı: 1 196 တထောင်သန်း 499 923 ဘီလီယံယူရို 29 စင်တာ
2-Kolin ဆောက်လုပ်ရေး + Galleon ဆောက်လုပ်ရေး: 1 205 တထောင်သန်း 456 553 ဘီလီယံယူရို 13 စင်တာ
Cengiz ဆောက်လုပ်ရေး-3: 1 232 တထောင်သန်း 619 236 ဘီလီယံယူရို 83 စင်တာ
1 ။ ဇာတ်စင်လိုင်းများ Neu-Meran စည်ပင်သာယာ
သဘောပေါက် Konya Metro နူးညံ့၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့်; Necmettin Erbakan တက္ကသိုလ်, Beyşehir Ring ကိုလမ်း, သစ်ကိုဘူတာရုံအဆောက်အဦ, ဖာတာအဖွဲ့, Ahmed က Ozcan ကီလိုမီတာနှင့် 21,1 ထံမှ 22 အထိပါဝင်သည်ဟု Meram မြူနီစီပယ်ကနေရပ်လိုက်ချေချင်းညာလမ်းစီမံကိန်း၏ပါဝင်ပါသည်။
2 ။ Campus လိမ့်မယ်ဇာတ်စင် LINE
သူတို့ဟာထို့နောက်2အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအဆင့် Aladdin ကျောင်းဝင်းအဖြစ်မြေအောက်လိုင်းများ၏ထုတ်ယူပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ Konya တစ်ခုလုံးကို Metro မြေအောက် built လိမ့်မည်။ ရှေ့ဦးစွာ မှစ. အဆုံးတိုင်အောင် 35 မိနစ်ခရီးသွားအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယင်းမက်ထရိုကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် 1 ဘီလီယံယူရို Konya တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။
Konya - Yenice Tepeköyလိုင်းမူကွဲနှင့် Musella Superstructure အလုပ်လုပ်တင်ဒါရလဒ်များ၏လုပ်ခြင်း 25 / 02 / 2018 Konya - Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲနှင့် Musella 2017 / 700905 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 421.286,62 TL နှင့် 656.801,00 TL, Konya အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး၏ထိပ်တန်းဆောက်လုပ်ရေးလေလံရလဒ်များ၏လုပ်ခြင်း - Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲပြီးတော့ကုမ္ပဏီ 27 မှအကျင့်ကိုကျင့်ကန်ထရိုက်ဖျော်ဖြေ၏ Musella ထိပ်တန်းဆောက်လုပ်ရေး တစ်ခုတည်းနှင့်တင်ဒါနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနှင့်£ 421.521,56 ŞERAFETTİN Mehmet Pehlivan များ၏လေလံ - BERKENT ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နုလေလံပါဝင် 10 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ Konya - ထိပ်တန်းနေရာများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးကြာချိန်အဘို့ပြု Yenice လိုင်းTepeköyမူကွဲပြီးတော့ Musella ...
Konya ဓါတ်ရထားလေလံရလဒ် (အထူးသတင်းများ) 17 / 10 / 2012 တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းရထားကားတစ်စီး Konya BB 60, ကုန်စည်နာရီ 58 ၏ 1 11 အရေအတွက် Deray ကလောင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး: 00 အဆိုပါ Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအတွက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ (ခကျြ) တွင် 60) SCO: 58 EUR / 1 EUR (နှစ်ခုဗားရှင်း) 1) PESA (ပိုလန်): 98.700.000 သန်း EUR 104.700.000) CNR ပစ္စည်းကိရိယာဧည့်ခံနှင့် ပတ်သက်. လေလံကုမ္ပဏီတစ်ခုကကောက်ချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော2ပမာဏဓါတ်ရထား Tool ကို 109 ကလောင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်3အရေအတွက် Deray (တရုတ်): EUR 110.294.788 4) Café (စပိန်): EUR 113.931.807 5) Astra (ရိုမေးနီးယား): EUR 121.740.488 6) Bombardier (ဂျာမနီ): အဆိုပါတင်ဒါစျေးနှုန်း EUR 160.315.533% စျေးနှုန်း၏ 70 30% ရလဒ် ...
Gebze Darıcaမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ်များ 18 / 05 / 2018 Gebze Darıcaမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လြှပျစစျစနစ်များပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတပ်ဆင်ပြီးတော့ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကော်မရှင်လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် - ထိုရထားစနစ်များဌာနခွဲ 2018 / 7064 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.15.120.556,77 TL နှင့်အရာ Gebze Darıcaမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လြှပျစစျစနစ်များ 2.797.169.355,54 TL လောက်ကုန်ကျစရိတ် တစ်ခုတည်း၏ထောက်ပံ့ရေးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကော်မရှင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရထားစနစ်များ EZ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ထရေးဒင်း Joint Stock Company ကို + Naka များအတွက် + Met ရက်ကြာဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောစျေးကွက် meting ပေးသောလေလံလေလံနှုန်းနူးညံ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက62.488.489.457,00 ဖြစ်ခဲ့သည်။ Taah ။ စန်း။ Tic.Ltd.Şti။ + Gokce inş.taah.tic.vစက် san.ltd .Ştiဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖက်စပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gaziantep xnumx.etap ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 06 / 12 / 2012 Gaziantep xnumx.etap İbrahimliဧရိယာရထားပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလြှပျစစျမီးနူးညံ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်34734 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2012 180823-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Incilipinar Mah ။ အမှတ် 1 CAD ။34 İncilipınarŞEHİTKAMİL / GAZIANTEP ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 27090 - 3422111200 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: နုစာရွက်စာတမ်း၏ ihale@gaziantep-bld.gov.t CA) ကအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: အ https: //ekap.kik.gov.t နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်) သဘောသဘာဝ, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ / ECAP / 3422111293-အကြောင်းအရာ: များ၏စာချုပ်၏သဘောသဘာဝ, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက် ...
TPC Malatya - Kolin ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏နူးညံ့သောအဘို့ Hekimhan လမ်းမကြီး (။2အပိုင်း) GCC နု၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ငွငျးပယျ 04 / 04 / 2013 အဝေးပြေးလမ်းမကြီး (TCK), အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Malatya ၏ "-Hekimh စုဆောင်းလေလံ၏ဇွန်လ 28 2012 နေ့စွဲဖြင့် - 16 ။ ခရိုင်နယ်စပ်အဝေးပြေးမိုင်အကွာအဝေး (2 အပိုင်း။ ): + 53 570 - ဖြတ်၏ 103 100 + ဆောက်လုပ်ရေး "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Kolin ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ပြည်သူ့ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအာဏာပိုင် (PPA), နု၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒီအဆင့်မှာအဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့ GCC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားလိမ့်မည်။ လူသိများသည်နှင့်အမျှ Kolin ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကောင်စီဇန်နဝါရီလ 28 2013 အစည်းအဝေးတွင်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီ (PPA) မိမိအယူခံဝင်များ၏ရလဒ်ကိုများအတွက်တင်ဒါရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ပြန်ပြောပြပါလိမ့်မည်သကဲ့သို့, နူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကို 155.728.310 ပေါင်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
သတင်းထောက် Mustafa သာယာသောလျော်ကြေးတရားစွဲဆိုမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ်
Konya - Yenice Tepeköyလိုင်းမူကွဲနှင့် Musella Superstructure အလုပ်လုပ်တင်ဒါရလဒ်များ၏လုပ်ခြင်း
Konya ဓါတ်ရထားလေလံရလဒ် (အထူးသတင်းများ)
TPC Malatya - Kolin ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏နူးညံ့သောအဘို့ Hekimhan လမ်းမကြီး (။2အပိုင်း) GCC နု၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ငွငျးပယျ
ဘီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်း crane တင်ဒါ TCDD JCC ကုမ္ပဏီ Liebherr ၏နူးညံ့၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ငွငျးပယျ
konyaray တရားမျှတရေးဓါတ်ရထားလေလံရလဒ် (အထူးအစီရင်ခံစာ)